FBS​မြန်မာရဲ့ ရန်ကုန်တွေ့ဆုံပွဲကြီးကိုတက်ရောက်ကြဖို့အတွက် ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်!
၂၀၁၇ ခုနှစ် မေလ ၂၈ရက်နေ့၊ တနင်္ဂနွေနေ့ ညနေ၆နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ Meliáဟိုတယ်တွင် တွေ့ဆုံပွဲကို ခမ်းနားစွာကျင်းပပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဖောက်သည်တော်တို့အတွက် ဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲအစီအစဉ်ကို စီစဉ်ပေးထားပြီးဖျာ်ဖြေရေးအစီအစဉ်တွင် အထူးဧည့်သည်တော်များအဖြစ်ဖိတ်ကြားထားသော မြန်မာပြည်သိန်းတန်၊ နီနီခင်ဇော်၊ ခင်လှိုင်၊ ဒိန်းဒေါင်တို့မှ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်. ထို့ပြင် အသစ်စက်စက် အကောင်းစား လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများနှင့် ဖုန်း၊ တက်ပလက်၊ တီဗွီအစရှိသည့် လက်ဆောင်ပစ္စည်း ၁၁မျိုးကို မဲဖောက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်.
ဒေါ်လာ တစ်သောင်းခွဲဖိုး တန်ကြေးရှိတဲ့ ဆုလက်ဆောင်များကို ချီးမြှင့်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်!
တွေ့ဆုံပွဲကျင်းပနေစဉ်အတွင်းမှာပဲ မဲဖောက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး - ကံထူးတဲ့ဧည့်သည်တော် ၁၁ယောက်ကတော့ နောက်ဆုံးပေါ်အကောင်းစား ဇိမ်ခံပစ္စည်းတွေကို လက်ဆောင်ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်:
• Acer Predator 8 Tablet (၂လုံး)
• iPhone7(၃လုံး)
• Samsung S7 Edge (၃လုံး)
• MSi GL62-7RD Laptop (၂လုံး)
• Super Prize: Panasonic 65" Ultra HD 4K စမတ်တီဗွီ (တစ်လုံး)
မြန်မာပြည်ရှိ အရောင်းအ၀ယ်သမားများ ပါတနာများကို အတူတကွ တစုတစည်းတည်းတွေ့ဆုံရဖို့အတွက် FBS​တွေ့ဆုံပွဲကြီးကို ကျင်းပပေးတာဖြစ်ပါတယ်!
FBS ရန်ကုန်တွေ့ဆုံပွဲကြီးကို တက်ရောက်ဖို့အတွက် လုပ်ဆောင်ရန်အချက် ၃ချက်သာရှိပြီး လုပ်ဆောင်ဖို့ရာလည်း လွယ်ကူလှပါတယ်:
• personal areaကို Verifyလုပ်လိုက်ပါ
• သင့်အကောင့်ထဲသို့ ဒေါ်လာငါးရာနှင့်အထက် ရင်းနှီးငွေထည့်သွင်းလိုက်ပါ
• အနည်းဆုံး lotတစ်ခု* ပြည့်အောင်ရောင်းဝယ်လိုက်ပါ
ဆင့်အကောင့်* ဖြင့်ရောင်းဝယ်ပါက - အနည်းဆုံးlotတစ်ရာပြည့်ရမည်ဖြစ်ပါသည်
ဖောက်သည်တော်တို့ကို တွေ့ဆုံခွင့်ရတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ပျော်ရွှင်ရပါတယ်!
တွေ့ဆုံပွဲကို ဧည့်သည်တော် အယောက် ၃၀၀အတွက်သာ စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်! အချိန်ဆွဲမနေပါနှင့်!